बुद्धचित्त संसारकै नयाँ प्रजाति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बुद्धचित्त संसारकै नयाँ प्रजाति
श्रावण १, २०७२ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौं — केही वर्षदेखि काभ्रे र रामेछापमा किसान/व्यवसायीका लागि राम्रो स्रोत बन्दै आएको बुद्धचित्तको रूख/बिरुवा संसारकै नयाँ रैथाने प्रजाति पुष्टि भएको छ । बुद्धचित्त बिरुवाको बाहिरी रूप बयर प्रजातिसँग मेल खान्छ ।
केही वर्षदेखि काभ्रे र रामेछापमा किसान/व्यवसायीका लागि राम्रो स्रोत बन्दै आएको बुद्धचित्तको रूख/बिरुवा संसारकै नयाँ रैथाने प्रजाति पुष्टि भएको छ ।
बुद्धचित्त बिरुवाको बाहिरी रूप बयर प्रजातिसँग मेल खान्छ । तर, यो विश्वका अन्य ठाउँमा पाइनेभन्दा बेग्लै रैथाने प्रजाति भएको वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा वनस्पतिविद् डा. खेमराज भट्टराई र अनुसन्धानकर्ता मित्र पाठकले प्रमाणित गरेका हुन् ।
दुईजनाको अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएकाले उक्त प्रजातिको नामै ‘जिजिपस बुद्धेन्सिस केआर भट्टराई एन्ड पाठक’ रहेको छ । भारतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन इन्टरनेसनल जर्नलमा बुद्धचित्तको रूख/बिरुवाबारे उनीहरूको आलेख भर्खरै प्रकाशित भएको छ ।
अनुसन्धानकर्ताहरू भट्टराई र पाठकले बुद्धचित्त पाइने काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमै गएर लामो अध्ययन गरी आलेख तयार गरेका थिए । ‘यो विल्कुलै नयाँ प्रजाति साबित भएको छ,’ भट्टराईले कान्तिपुरलाई भने, ‘यसमा लुकेका वैज्ञानिक तथ्यलाई केलाउँदै अब खेती प्रविधिलाई बढावा दिनुपर्छ ।’
उनीहरूले बुद्धचित्तको बिरुवालाई राष्ट्रिय हर्वेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशाला गोदावरीमा ल्याई अध्ययन गरेका थिए । सामुद्रिक सतहबाट १२०० देखि २००० मिटर उचाइको जमिनको पाखोबारीमा पाइने बुद्धचित्तको माला बौद्व धर्मालम्बीले प्रयोग गर्छन् ।
भगवान् बुद्धले ध्यानका क्रममा तीन ठाउँमा छाडेका बिरुवामध्ये लुम्बिनी र काभ्रेको नमोबुद्धमा मरेर गएको तर काभ्रेकै तिमाल क्षेत्रमा चाहिँ बाँचेको, त्यसैबाट फैलिएको किम्बदन्ती छ ।
पछिल्लो समय काभ्रे र रामेछापमा बुद्धचित्तको एउटै रूखबाट किसानले लाखौं आम्दानी गर्न थालेका छन् । सहसचिव भट्टराई यसको व्यावसायिक खेतीतर्फ किसानलाई प्राविधिक ज्ञान दिनसके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने बताए । ‘थोरै पानी पर्ने, सुक्खा, गेग्रान र धेरैजसो रातो माटोमा यसको खेती राम्रो भएको पाइएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘रोपेको तीन या चार वर्षबाटै फल दिन थाल्ने यो विरुवालाई त्यति स्याहार आवश्यक पर्दैन ।’
अनुसन्धानकर्ता पाठकका अनुसार २०० देखि २५०० मिटरको उचाइसम्म यसको खेती हुन सक्छ । ‘बुद्धचित्तजस्तै फल दिने तथा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने सुनगाभा तथा विजयसाल, सतिसाल, श्रीखण्ड, पोलुनियाजस्ता बिरुवाको अनुसन्धान र व्यावसायिक खेतीसम्बन्धी प्रविधि हस्तान्तरण गर्नसके किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेछन्,’ पाठकले भने ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७२ ०२:३७
१६ बुँदेविपरीत अभिव्यक्ति किन ? : एमाले
भारत भ्रमण जान लागेको होइन : नेपाल
श्रावण १, २०७२ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया लम्ब्याउने ढंगले १६ बुँदे सहमतिविपरीत हस्ताक्षरकर्ता दलकै नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ
। स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलबाट फरक धारणा आउँदा संविधान निर्माण प्रभावित हुने ठहर गरेको छ । सहमतिविपरीतका अभिव्यक्ति नदिन एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘१६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने वातावरण बनेको छ तर यसको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति दिँदै हिडदा माहोल बिग्रिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘१६ बुँदेमा संशोधन गर्नुपर्ने छ भने बरु ४ दल नै मिलेर छलफल गरौं तर सहमति नगरी फरक–फरक धारणा बाहिर नल्याउन हाम्रो आग्रह छ ।’
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नै बुधबार जनकपुरको कार्यक्रममा प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै, कांग्रेसकै महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको संरचना टुंग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसकै एक प्रभावशाली मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सीमा नटुंग्याए संविधान जारी हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
कांग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ । गत साताको बैठकमा सीमा टुंग्याउनुपर्ने माग सभासदहरूले उठाएका थिए । सीमाको विषय धेरै उठेपछि विकल्पमा सीमांकन नटुंगिदासम्म संविधानसभाको कार्यकाल नै लम्ब्याउने विकल्प कांग्रेस बैठकमा आएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले पनि विभिन्न समूहसँगको भेट र सार्वजनिक मञ्चहरूमा सीमा टुंग्याएरै संविधान जारी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
१६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन संघीय आयोगले टुंग्याउने उल्लेख छ । संघीय आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा रूपान्तरित संसदले तीन महिनाभित्र प्रदेशको सिमाना टुंगो लगाउने १६ बुँदेमा उल्लेख छ ।
प्रमुख दलहरूबीच सीमाको विषयमा कुरा नमिलेकै कारण यसलाई थप अध्ययनपछि टुंग्याउने सहमति भएकोमा फेरि टुंग्याइहाल्ने बहस थाल्दा तत्काल संविधान जारी हुन नसक्ने एमालेको बुझाइ छ । एउटा विषयले अडकँदा अन्य जलिटता पनि थपिन सक्ने भएकाले भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गरिहाल्ने दिशामा जानुपर्ने एमालेको धारणा छ ।
‘१६ बुँदेमा केही प्रस्ट गर्नुपर्ने छ भने सबै दल बसेर फेरि टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,’ सचिव भट्टराईले भने, ‘तर बिना छलफल सहमतिविपरीत हिँड्न भएन ।’
सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नका लागि राष्ट्रपतिदेखि संविधानसभाका अध्यक्षसम्मैले दलहरूलाई सार्वजनिक आग्रह गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवले केही दिनअघि दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै सीमांकन पनि टुंगो लगाउन सुझाव दिएका थिए । सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले पनि संविधानको धारणा पारित गर्ने बेलासम्म पनि दलहरूका लागि संशोधन गर्ने समय हुने भएकाले सकेसम्म त्यो अवधिमा सीमालगायत विषय टुंग्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफू भारत भ्रमण जाने भन्ने कुरा गलत भएको जानकारी गराएका थिए । पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उनले भारतीय पक्षबाट भ्रमणका लागि कुनै निम्तो नआएको र आफूले पनि कुनै पहल नगरेको भन्दै बाहिर आएका हल्लाहरू प्रायोजित भएको दाबी गरे । नेता नेपालले भ्रमणको निम्तो आए पार्टीसँगको सरसल्लाहमा मात्र जाने/नजाने निर्णय गर्ने जनाए ।
संविधान निर्माणमा सुझाव संकलन गर्ने बेला नेताहरू भारत भ्रमणमा जान लागेकामा आलोचना भइरहेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमै छन् भने उनीपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जान लागेका छन् । उनीपछि एमालेका नेता नेपाल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि भ्रमणमा जाने सूचीमा रहेको सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक चासो प्रकट भएपछि नेता नेपालले पार्टीको बैठकमा यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण १, २०७२ ०१:३०